Ndụmọdụ 5 iji Were Broshọ Azụmaahịa Gị Ọkachamara | Martech Zone
Sunday, Eprel 12, 2015 Douglas Karr
Mpempe akwụkwọ gị, akwụkwọ mgbasa ozi, broshuọ, PDF, broshuọ ngwaahịa… ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya, enyemaka dị ya mkpa. Anyị na-adịbeghị anya tinye ọnụ a mgbasa ozi & nkwado maka saịtị ahụ mgbe arịrịọ ka emere.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ ka na-achọ ibudata na ibipụta akwụkwọ ma anyị ka ji obi anyị na-ekesa akwụkwọ ebipụta. Ghara ikwu eziokwu na mpempe akwụkwọ mara mma nwere ike ị nweta nlebara anya. Ọ na-atụgharị dị iche na ọtụtụ ozi na mgbasa ozi nkesa na-ahụ maka ịzaghachi n'ihi na ọ bụghị nnukwu asọmpi n'ebe ahụ.
Achọrọ Mbipụta na Ireland ewepụtala infographic a inye ihe ga - enyere gị aka inweta nlebara anya maka itinye ego, Mepụta mpempe akwụkwọ azụmahịa zuru oke.
Mara ihe ị ga-ekwu, onye ị na-agwa ya, otu esi ekwu ya, yie ndị ọkachamara ma hapụ ha ka ha nọrọ ọdụ nkịtị. Nha, isi okwu, nhazi ahịrịokwu, onyonyo, agba yana - karịa nke a niile - ịkpọ oku ime ihe, dị oke mkpa na broshuọ dị ukwuu. Anyị na-akwado iji ụfọdụ ụdị ekwentị nsuso ma ọ bụ trackable URL na ibe ka ị mara ndị nke ịrụ mma karịa ndị ọzọ.
Achọrọ Mbipụta na-atụ aro usoro AIDA:
ige nti - Mee ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ.
Interest - Mee ka onye na-agụ ya nwee mmasị.
ọchịchọ - Mepụta ọchịchọ site na iji onyonyo na ozi na-eme ka mmadụ kwenye.
Action - Gbaa onye na - agụ ya ume ime ihe.
Tags: nyeerebroshuọbroshuọ imeweakwukwo akwukwoihe mgbasa ozichọrọ mbipụtamkpaotu-mpempe akwụkwọotu-mpempe akwụkwọ imewepdfbroshuọ ngwaahịaire otu-mpempe akwụkwọnkwado kit